घरेलु भूमिमा इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई १० वर्षपछि हरायो ! – onlinekhelkhabar.com
Complete website for Nepali Sports News
घरेलु भूमिमा इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई १० वर्षपछि हरायो !
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on १० भाद्र,२०७७
एजेन्सी । इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानविरुद्धको टेस्ट सिरिज १० बर्षपछि घरेलु मैदानमा जितेको छ ।
तीन खेलको सिरिज अन्तर्गत मंगलबार राति सकिएको सिरिजको अन्तिम तथा निर्णायक खेल बराबरीमा सकिएपछि घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले एक दशकपछि घरेलु भूमिमा सिरिज जित्न सफल भएको हो । यसअघि इंग्ल्यान्डले सन् २०१० मा पाकिस्तानलाई घरेलु मैदानमा ३-१ ले पराजित गरेको थियो ।
र त्यसको ठिक दश वर्षपछि पाकिस्तानलाई १- ० ले पराजित गरेको छ । यसअघि सिरिजमा इंग्ल्यान्डले पहिलो खेल ३ विकेटले जितेको थियो । भने दोस्रो खेल पनि बराबरी हुन् पुगेको थियो ।
यता मंगलबार फलो अनमा ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले आफ्नो विकेट बचाएपछि खेल बराबरी हुन् पुगेको थियो । जस अन्तर्गत पाकिस्तानले ८३.१ ओभर खेल्दै मात्र ४ विकेट गुमाएर १ सय ८७ रन बनाएको थियो ।
जसमा बावर आजम ६३ रनमा अविजित रहे भने अविद अलिले ४२ रन तथा कप्तान अजहर अलिले ३१ रन बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ भने इंग्ल्यान्डका जेम्स एन्डरसनले २ विकेट हात पारे । यो विकेट सँगै उनी टेस्ट तर्फ ६ सय विकेट लिने चौथो खेलाडी र तिब्र गतिका बलरमा पहिलो खेलाडी बनेका छन् । यस्तै कप्तान रुट र स्टुअर्ट ब्रडले समान १/१ विकेट लिएका थिए ।
त्यसअघि साउथह्याम्प्टनस्थित रोज बाउलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले पहिलो पारीमा १५४.४ ओभर ब्याटिङ गर्दै ८ विकेटको क्षतिमा ५ सय ८३ रन बनाएको थियो ।
पहिलो पारीमा नै विशाल रन बनाउने क्रममा इंग्ल्यान्डका जक क्रॉलीले सर्वाधिक धेरै रन बनाएका थिए । ३९३ बलको सामना गरेका उनले ३४ चौका र १ छ्क्कासहित २ सय ६७ रनको योगदान गरेका थिए ।
यस्तै विकेट किपर ब्याट्सम्यान जस बटलरले पनि १ सय ५२ रनको योगदान गरेपछि इंग्ल्यान्ड पहिलो पारीमानै विशाल रन तर्फ अग्रसर भएको थियो । यी दुई बाहेक क्रिस वोक्सले ४० तथा डोमिनिक बेसले अविजित रहदै २७ रन बनाएका थिए ।
बलिङतर्फ पाकिस्तानका शाहीन अफ्रिदी, यासिर शाह र शान मक्सुदले समान २/२ विकेट हात पारेका थिए । भने नशिम शाह र असाद शाफिकले पनि १/१ विकेट लिएका थिए ।
त्यसपछि पाकिस्तानले आफ्नो पहिलो पारीलाई सुरुवात गर्दै ९३ ओभरमा आफ्नो सबै विकेट गुमाउँदै २ सय ७३ रनमा सिमित हुन् पुग्यो ।
ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका कप्तान अजहर अलिले सर्वाधिक धेरै रन बनाए । अविजित रहेक उनले २७२ बलको सामना गर्दै २१ चौकाको मद्दतमा १ सय ४१ रन बनाए ।
यस्तै विकेट किपर ब्याट्सम्यान मोहम्मद रिजवानले पनि अर्धशतकीय पारी खेल्ने क्रममा ५३ रन बनाएका थिए । यी बाहेक फवाद आलमले २१ र यासिर शाहले २० रन जोडे ।
बलिङतर्फ इंग्ल्यान्डका जेम्स एन्डरसन एक्लैले ५ विकेट हात पार्दा स्टुअर्ट ब्रडले २ तथा क्रिस वोक्स र डोमिनिक बेसले पनि १/१ विकेट लिन सफल भए ।
यसरी पहिलो पारीमा पाकिस्तानलाई सस्तैमा समेटेपछि इंग्ल्यान्डले पहिलो पारी भित्र ३ सय १० रनको अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई फलो फन दिएको थियो ।
टेस्ट सिरिज सकिएपछि यी दुईले अब ३ खेलको टी- ट्वान्टी सिरिज खेल्ने छन् । पहिलो खेल शुक्रबार हुनेछ ।
Previous Postएविन लुइसको सानदार ब्याटिङमा सेन्ट किट्सको पहिलो जित
Next Postसिपीएलमा जमैकाको दोस्रो जित : सन्दीपको कसिलो बलिङ
ललितपुरमाथि काठमाडौंको सानदार जित
ईपीएल आजबाट : उद्घाटन खेलमा ललितपुरले काठमाडौंको सामना गर्ने
कुशलले ललितपुरको कप्तानी गर्ने
ज्ञानेन्द्र मल्लले ईपीएल नखेल्ने
ओमानमाथि नेपालको सानदार जित
यी हुन् क्यानले नियुक्त गरेको प्रदेशका क्रिकेट प्रशिक्षकहरु
अमेरिकाविरुद्ध कप्तान मल्लको अर्धशतक पूरा